Fursad tabaruc: Xafiiska Xiliga Fasaxa Tabarucaha - Cuntooyinka Taayirada
Fursada Tabaruca: Xiliga Fasaxa Xafiiska Iskaa Wax U Qabso
Ka mid noqo bulshada dadka ka dhigaya nolol caafimaad leh oo madaxbannaan suurtogalnimada waayeelka maxalliga ah iyo dadka naafada ah. Metro Meals on Wheels waxay raadineysaa xafiis iskaa wax u qabso ah xilliga fasaxa.
Booskani waa mid kufiican qof doorbida inuu kashaqeeyo daaha gadaashiisa laakiin wali raba inuu door weyn ka ciyaaro caawinta naloogu jiro inta sanadka ugu mashquulka badan. Waxaan raadineynaa qof awooda inuu tabaruca ugu yaraan 2 saacadood usbuuciiba muddo seddex bilood ah, ugu badnaan Nofeembar - Janaayo. Saacadaha waa la jadwalayn karaa Isniinta-Jimcaha inta u dhexeysa 10 subaxnimo iyo 4 galabnimo
Waajibaadka Shaqooyinka iyo Aqoonta
Waajibaadka ugu weyn ee booskani wuxuu galayaa tabarucaadka keydkeena deeqaha, maadaama dhamaadka sanadka uu yahay waqtiga ugu caansan bixinta. Iskaa wax u qabso xafiisku wuxuu kaloo abuuri lahaa oo ka baaraandegi doonaa deeq-bixiyeyaasha mahadsanid waraaqaha wuxuuna ka shaqeyn doonaa mashaariicda kale ee xog-gelinta Tabaruceyaashu waa inay ahaadaan ugu yaraan 18 sano jir, leeyihiin awood ay ku shaqeeyaan kumbuyuutar iyo barnaamij aasaasi ah, waana inay lahaadaan rabitaan iyo karti ay ku bartaan xirfado cusub. Jagadani waxay kaloo u baahan tahay gaadiid lagu kalsoon yahay oo taga xafiiskayaga magaalada hoose ee Minneapolis - meel baabuurta la dhigto oo bilaash ah.
Maxay Tahay Inaan Isxilqaamo?
Adoo noqda mutadawiciin xafiis waxaad kaheli doontaa aragti iyo qibrad qaali ah qaybta aan macaash doonka ahayn, oo lagu dari karo resumeyga. Saddexda bilood ee adeegga ka dib waxaan ku siin doonaa warqad tixraac ah. Faa'iido kale oo ku saabsan tabarucidda xafiiska Meals on Wheels ayaa ah inaad taageeri doontid dadaalladeena aan ku siineyno waayeelka iyo dadka naafada ah cunno nafaqo leh iyo xiriir aadanaha si ay ugu madax bannaanaadaan guryahooda.
Si aad u codsato: U dir resume iyo warqad dabool Eva Hansen halkan [email protected].